Iintolo zeMicrosoft PowerPoint: Iindidi zeetolo kunye nendawo ezifumaneka kuyo | Abadali be-Intanethi
Iintolo zeMicrosoft PowerPoint
UNerea Morcillo | 26/05/2022 17:00 | Izibonelelo, Ikhathuni vector
Umthombo: App Store
IiVectors zisinceda ngeendlela ezahlukeneyo ekusebenzeni koyilo lwethu, njengoko beza kuzo zonke iintlobo kunye neendlela ezininzi. Kuyinyani ukuba, kuxhomekeke kwindlela i-vector ekhoyo ngayo, ingaba neempawu ezahlukileyo ukusuka kwenye, kwaye ngale ndlela, iqondise iprojekthi yethu okanye iqondise ngendlela eyahlukileyo.
Yiyo loo nto zizinto zegraphic eziyinxalenye yoyilo lwegraphic, njengoko sisazi, kwaye zihlala zikhona. Kodwa kwelinye icala, kukho ezinye ezincinci ezisebenza njengee-icon okanye imiqondiso, ezikhomba kuthi kwaye zisazise ngomyalezo othile, ngakumbi ukuba umalunga neenkcazo-ntetho.
Ngesi sizathu, Kule post, size kuthetha nawe malunga nenkqubo esele isetyenziswa iminyaka emininzi, eyinxalenye yeMicrosoft kwaye inezinto ezininzi zokusixelela, yiPowerPoint., kodwa akuphelelanga apho, kodwa kwakhona, Siza kukubonisa ezinye zezona zithwala zibalaseleyo, kule meko iintolo, ukuze ukwazi ukuzisebenzisa kwiiprojekthi zakho ezilandelayo.
1 I-PowerPoint: Izinto eziluncedo kunye nezinto ezingeloncedo
1.1 Izinto ezilungileyo zePowerPoint
1.2 Ukungalungi kwePowerPoint
1.2.1 Iimpazamo ezinokwenzeka
1.2.2 sebenzisa itekisi eninzi
1.2.3 sebenzisa imifanekiso emininzi
2 Uluhlu lweentolo zePowerPoint
2.1 Ithempleyithi yeentolo zomgca
2.2 Iintolo zetemplate 2
2.3 Iintolo zetemplate 3
2.4 Iintolo zetemplate 4
I-PowerPoint: Izinto eziluncedo kunye nezinto ezingeloncedo
I-PowerPoint yinkqubo eyinxalenye ye-Microsoft, eyilelwe ngokukodwa ukuyilwa nophuhliso lweentetho ngezilayidi ezahlukeneyo. Yadalwa ngexesha le-80 kwaye yathengiswa ngo-1987 kuBill Gates, ngaloo ndlela ivula iingcango kwihlabathi leMicrosoft.
Ithathwa njengenye yeenkqubo ezisetyenziswa kakhulu, kuba ngonyaka, abasebenzisi abaninzi bayisebenzisela iiprojekthi zabo. Sisixhobo esiluncedo kakhulu kwaye kulula ukusisebenzisa, enyanisweni, ujongano lwayo lulula kangangokuba sele lucwangcisiwe kunye nezinye iitemplates ezisisiseko ukuze zisetyenziswe kuyilo.
Yaphuhliswa kwiinkqubo zombini zeWindows kunye ne-IOS, nangona sele inezinye izixhobo ezinjengeetafile kunye neeselfowuni.
Izinto ezilungileyo zePowerPoint
Ngenkqubela phambili yohlaziyo kule nkqubo, ekuhambeni kwexesha, iye yaphuculwa ngendlela yokuba yonke imihla ibonelele ngezibonelelo ezininzi kubasebenzisi bayo, kwimeko yeentetho ngentsebenziswano nabanye abasebenzisi okanye abantu.
Esi sixhobo, inika ithuba lokuba ukwazi ukuyila kwaye ulungise ezinye zeenkcazo-ntetho oziyileyo kwi-intanethi. Ngamanye amazwi, akuyi kuba yimfuneko ukucinezela iifolda ukuba uzithumele, ngakumbi ezo zithatha izithuba ezinkulu, kodwa ngoku kunokwenzeka ukuba usebenze iifayile kunye ngale ndlela, ngaphandle kokuzithumela.
I-PowerPoint yinkqubo eyilelwe umboniso, kodwa ikwajongwa njengesoftware eyenzelwe ukuseta nokusebenza eminye imisebenzi, umzekelo, Ukwanalo nokhetho lokuyila kunye nokuyila iipowusta okanye iincwadana. Olunye ukhetho olusebenzayo kukwenza ii-animated GIFS. Ikwanazo neetemplates ezininzi apho unokuthi uyila i-resumes ukusuka ekuqaleni kunye nezinye iintlobo zamaxwebhu.
Ngokufutshane, sisixhobo esiluncedo kakhulu esizalisekisa iindidi ezininzi zemisebenzi. Olunye uphawu lokuqaqambisa kukuba lukwaqulethe izinto ezithile ezinxulumene nokuthengisa kwedijithali, ngenxa yesi sizathu, sinokufumana iitemplates ukuze sikwazi ukuyila amaxwebhu anomdla afana ne-infographics.
Ukuba sinokuthi sanelisekile ngayo nantoni na xa sisebenzisa le nkqubo, kungenxa yokuba ivumela ukuba sithumele ngaphandle zombini izinto zegraphic kunye nemultimedia. Ngale ndlela, sifumana izinto ezinezandiso ezifana ne-.wav, .png, .pdf, .mp4 kunye nakwifomathi ye-.gifs.
NgePowerPoint, awuzukuba nangxaki ngalo mzuzu wokuthumela ngaphandle. Ukongeza, hlala uzama iindlela ezintsha zokuthumela ngaphandle kwaye ufumane eyona ndlela ikhululekileyo kunye neyona ifana nawe.
Ungalibali ukuthumela iiprojekthi zakho kwaye ziya kuba nobuchwephesha kangangoko.
Njengoko besitshilo ngaphambili, Le nkqubo inothotho lweetemplates ezisisombululayo kwaye zinciphise ixesha loyilo olugqithisileyo. Ngokomzekelo, sinokufumana iitemplates apho isicatshulwa kunye nomfanekiso sele zibekwe ngokuchanekileyo, kwaye kufuneka sidlulisele kuphela loo ngcaciso kunye neyethu.
Ngesi sizathu, siyakucebisa ukuba, ukuba sisihlandlo sokuqala usebenzisa iPowerPoint, ngaphambi kokuba uqalise ukuyila intetho, jonga iitemplates ezikunika zona, kuba ziya kukunceda kuyilo kwaye ziya kwenza umboniso yiprojekthi yeyona ngcali.
Ihlabathi lobuchwephesha lisincedile ukuba siqhubeke siqhubela phambili kunye nokudala iinjongo ezintsha, kodwa iteknoloji esithetha ngayo nayo inobuso obufihliweyo, okanye kunoko, icala elibi. I-PowerPoint yenye yezo nkqubo ethi, itekhnoloji yayo ikwadlala amaqhinga ngamaxesha athile okwenziwa kwayo, kwaye ngenxa yoku, sinokufumana iingxaki zobugcisa kwindlela yakho.
Ikhompyuter yakho inokucotha kakhulu okanye udibana neengxaki ezithile ngoqhagamshelwano lwe-intanethi. Ngokuqhelekileyo ziziphoso eziqhelekileyo ezenzekayo xa usebenzisa olu hlobo lweprogram.
sebenzisa itekisi eninzi
Oku kungalunganga kungaphezulu kwinqanaba loyilo lwezilayidi kunye nemiba yobugcisa ngakumbi malunga noyilo kunye nomboniso wayo. Njengomthetho jikelele, sikholisa ukusebenzisa ngamanye amaxesha, isicatshulwa kakhulu kwizilayidi, kuba inkqubo ngokwayo icebisa kwaye isinika uluhlu lweetemplates apho okubhaliweyo ngowona mmeli uphezulu.
Kodwa ukusebenzisa kakubi olu phawu, kunokubangela ukuba kwezinye iimeko, umboniso ungacebisi okanye unganikeli ngqalelo efunekayo kumntu obukeleyo.
Ngesi sizathu, sikwacebisa ukuba xa uyila intetho yakho, usebenzise ezinye izixhobo ezinokushwankathela into ofuna ukuyibonisa ngesicatshulwa, esifana nemifanekiso, imizobo, njl. Zizinto ezinceda ukugcina uluntu lunomdla kwinto oyithumelayo.
sebenzisa imifanekiso emininzi
Kwelinye icala, sikwafumana iinkcazo-ntetho apho sifuna ukunciphisa ixesha kangangoko sinakho, kwaye sityekele ekusebenziseni nasekusebenziseni kakubi imifanekiso njengendlela yokusika ulwazi. Kwenzeka ntoni kwezi meko kukuba umbukeli uyadikwa yimifanekiso emininzi, ulwazi alukwazi ukufikelela kwizibuko elilungileyo kwaye uluntu luhlala luthatha ezinye iintshukumo ezinokuphambukisa ingqalelo yalo epheleleyo kwenye indawo.
Eyona nto ibalulekileyo kukwazi ukuxuba zombini izinto ukufumana iziphumo ezilungileyo.
Uluhlu lweentolo zePowerPoint
Ithempleyithi yeentolo zomgca
Le thempleyithi ilandelayo inoluhlu olubanzi lweentolo ezinomdla kakhulu zokuqaqambisa ulwazi kwiprezenteyishini yakho. Yahluke kangangokuba Inezifanekiso ze-32 ezipheleleyo ezineentolo ezihluke ngokupheleleyo. Uninzi lwezi templates ziyi-infographics, kwaye zibonakaliswe ngokuba zigcwele imibala.
Ikwagqamile, ukubanakho ukukwazi ukuziqhelanisa ngendlela esiyithandayo, uphawu olubaluleke kakhulu, kuba singakwazi ukuhlela izinto kwiimilo ezininzi kunye nemibala. Jonga kwaye ungalibali ukubazama.
Iintolo zetemplate 2
Le template elandelayo, Ibonakaliswa ngokuqulatha isilayidi ezingama-55 ngendlela ye-infographics, enokuba nomdla kakhulu, njengendlela yokunciphisa umthamo ogqithisileyo wombhalo kulwazi kwaye ushwankathele ngezinto ezininzi.
Iintolo ziyilwe ngendlela yokuba nganye kuzo iqulethe umbala owahlukileyo, kodwa enye into efana nethempleyithi yangaphambili kukuba sikwanalo nokukhetha ukukwazi ukusebenzisa kunye nokuhlela iintolo njengoko sithanda.
Ngamafutshane, uluhlu lweetemplates zamahhala ongafanele uphoswe kuyo nantoni na ehlabathini.
Iintolo zetemplate 3
Umthombo: Isakhelo sePPT
Ngolu luhlu lweetemplates, uya kuba nokufikelela kwi-1300 iyonke eyahluke ngokupheleleyo kunye nezilayidi ezinoopopayi, ukuya kuthi ga kwi-5o kunye ne-60 yemibala eyahlukeneyo. Awungekhe uluphose olu luhlu lubanzi lweetemplates eziphawulwa ikakhulu ngokuba zezona ziyila kunye nezobugcisa.
Ukongeza, ngokungathi oko akwanelanga, zikwafakwe kwikhathalogu ngendlela yokuba sikwazi ukuphanda imixholo engaphezu kwe-10 eyahlukeneyo, ke ngoko, sifumana zonke iintlobo zezinto, ukusuka kwiintolo ukuya kwimifanekiso enomdla kakhulu kunye neevektha esele ziyilelwe ukuzisebenzisa. .
Ungalibali ukukhuphela kwisixhobo sakho olu ngcelele lweetemplates ezidlamkileyo abazenzele zona.
Iintolo zetemplate 4
Ngale template awuyi kuba nokufikelela kuphela kuthotho lweentolo ezinomdla kakhulu kunye nezinto, kodwa uya kuba nokufikelela ekukhupheni imifanekiso oyifunayo kwiinkcazo zakho. Ngale ndlela, uya kukwazi ukonwabela ithala leencwadi elibanzi lemifanekiso.
I-drawback kuphela kukuba ziyimifanekiso ye-premium, ngoko zifuna iindleko ezithile, kodwa ziyimifanekiso esemgangathweni ophezulu, apho unokwenza ukusetyenziswa okukhethekileyo kuzo.
Unesibindi sokuzama le ndlela intsha yeetemplates esele zisefashonini kwaye udale i-infographics yeprofayile ephezulu emangalisayo.
Ukuza kuthi ga ngoku, iPowerPoint yeyona nkqubo isetyenziswa kakhulu ukwenza iinkcazo-ntetho kunye neeprojekthi ngokusebenzisa iitemplates ezinomdla kunye nezibonelelo eziququzelela uphuhliso lwabo.
Kukho ii-icon ezininzi kunye ne-vectors ezikhoyo kwaye zisebenza njengesikhokelo, kulo mzekelo, sithethe ngeentolo kunye neetemplates esele zenziwe.
Siyathemba ukuba ufunde ngakumbi malunga nehlabathi le-PowerPoint, iitemplates zalo kunye nesi sixhobo esisetyenziswa kakhulu ngabasebenzisi beWindows abasebenzisa kwaye basebenze ngezibonelelo zabo ezahlukeneyo.
Sifunde kwisithuba esilandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iintolo zeMicrosoft PowerPoint